Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi oo ku heshiiyey qodobo dhowr ah
Madaxweynayaasha Kenya iyo Somaliland, Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa war-murtiyeed ka kooban 10 qodob kasoo saaray wada-hadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi kadib markii Kenya ay casuumad rasmi ah u fidisay madaxweynaha Somaliland.
War-murtiyeedka wadajirka ah ayey labada madaxweyne ku sheegeen inay dib u xaiiqjinayaan sida xooggan oo ay uga go’an tahay inay sii dheereeyaan xiriirka saaxiibtinimo ee Kenya iyo Somaliland.
Qoraalka ayaa lagu yiri “labada madaxweyne waxay xuseen, ayaga oo aad ah ugu qanacsan, in iskaashiga ka dhexeeya Kenya iyo Somaliland uu salka ku hayo mabaadi’ iyo qayim ay wadaagaan oo ujeedkoodu yahay kobcinta nabad waarta, xasillooni, koritaan joogto ah, iyo barwaaqo wadaag ah. Ayada oo ay quseyso arrintan, waxay ballanqaadeen inay xoojiyaan, oo ay sii dheereeyaan iskaashiga u dhexeeya Kenya iyo Somaliland.”
“Ayada oo ay quseyso arrintan, labada hoggaamiye waxay isla qireen in Somaliland ay sanado badan aheyd nabad iyo xasillooni, taasi oo ku timid sida ay uga go’an tahay mabaadi’ida dimoqraadiga ah iyo aasaasidda hay'ado dowladeed oo adag. Kenya iyo Somaliland waxay sii wadi doonaan inay si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo xasilloonida, iyo raadinta barwaaqo wadaag ah,” ayaa lagu yiri qoraalka.